Joomla Muqaal - Sida loo dar Muqaal ah in Joomla Qodobka
> Resource > Talooyin > Sida loo dar Muqaal ah in Joomla Qodobka
Joomla waa mid ka mid ah System caanka Content Management ( CMS ). Waxay bixisaa aad u badan ka kooban, modules ama plugins in uu abaabulo ku jira in aad ugu gelin kartaa tamarta gal laftiisa ku jira. Laakiin waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale u baahan wax u eg slideshow photo in lagu daro saameynta dheeraad ah si aad u content.
1 Samee Joomla slideshow
Download iyo rakibi Flash Gallery Factory, ka dibna waxaad ka heli doontaa 60 foom oo sawir gallery si ay adiga kuugu Joomla slideshow goobtii. Foomamka suurtogelin qof si ay u abuuraan oo ay slideshow photo u gaar ah sida pro ah.
2 Upload slideshow in Joomla (optional)
Haddii aad doorato in aad slideshow wax soo saarka si ay u computer, aad u baahan tahay si ay u geliyaan in ay xarunta warbaahinta ee Joomla. In sidaa la yeelo, login aad Joomla dib-dhamaadka, oo taga si Manager Media. Waxaa aad gali kartaa slideshow Jabbuuti iyo faylasha kale ee warbaahinta. Haddii aad qabto FTP ah, waxa kale oo aad isticmaali kartaa-in dhisay FTP uploader ee Flash Gallery Factory inay geliyaan aad Joomla slideshow.
Flash Gallery Factory taageertaa XML daabacaadda kexeeyey oo Joomla slideshow ama gallery. Haddii aad doorato sidan si uu u badbaadiyo Joomla slideshow, waxaad u baahan tahay in ay geliyaan oo dhan files kaabayaal si Joomla.
3 Embed Joomla Muqaal
Joomla bixisaa editor qoraalka awood badan u isticmaala inay xaalkaa articles. Waxaa inta badan la qorsheeyo hab iyo hab code. Waxaad u baahan tahay inaad ugu bedesho hab code in Cudarada Joomla slideshow. Markaas paste xeerka koobi foomka Flash Gallery Factory in meesha aad rabto in aad soo bandhigaan Joomla slideshow.
Code ee Joomla slideshow eegi doonaa sida tan. Just wuxuu dhigay meel u dhaxaysa <jirka> iyo </ jirka> tags.
Waa inaad taxadar cinwaanka Joomla Jabbuuti oo slideshow. Waxaad ku paste laga yaabaa in ay caleenta web si loo hubiyo in ay slideshow Joomla la caadiga ah ciyaari karay. Waxaa intaa dheer, la beddelo width iyo dhererka haddii loo baahdo. Marka wax ayaa u diyaar ah, ku eegaan aad Joomla article si ay u arkaan in bandhigay slideshow si sax ah. Marka aad ku qanacsan tahay, daabacaan aad Joomla slideshow iyo dadka kale Rujiyo.
Halkan waxaa ku qoran tusaale ah slideshow Joomla:
Cab Photo Muqaal